I-Talismans njengesipho ku-Feng Shui
Ubudlelwane Umtshato Izipho zomtshato
Yeka uvuyo ukunika izipho! Kodwa ingaba nzima kangakanani ukwenza ukhetho olufanelekileyo. Ndingathanda ukumangaliswa kunye nesipho, kodwa kuyimfuneko ukuba kufuneka ifike ngendlela, oko kuthetha, ihambelana ngokupheleleyo nale meko. Ingaba ngumhla wokuzalwa, usuku lomtshato, iqela lokuhlalisa indlu, nayiphi na iholide yoqeqesho okanye ufuna ukukholisa abo bathandekayo.
Ukuba sikhethe isipho kuwumsebenzi obalulekileyo kunye nobunzima, kuba, ngaphezu kokubaluleka nobuhle, ndifuna ukuba ukuthenga kungabi kubi kakhulu kwipokhethi yam. Isipho esifanayo sinokuba nayiphi na i-feng shui, kufuneka ufumane ukuhluka.
Isipho sokubulisa umntwana osandula
Ukuba uyamenywa kwireko lokuzalwa, abazali baya kufana nesipho esiza kuzalisa ummandla osondelene nomntwana onamandla amnandi, kuya kukhuthaza ukuphuhliswa, kunceda ukukhusela kwisifo. Kule meko, ungakhetha kwaye unike i-Dragon of Dragon, xelela abazali ukuba lo mdlali uya kuncedisa umntwana wakhe akhule kwaye anamandla, ngumsizi we-Dragon-oku yiyona nto inamandla kakhulu kwimfundiso ye-feng shui.
Unokunika umtsalane onokuluxhoma phezu kwebhedi lomntwana. Umtshini kuphela omele wenziwe ngezinto eziphathekayo - u-bamboo, ukhuni okanye isilikhi. Uya kunceda ukukhusela umntwana kwisifo nangomoya onobubele. I-dog's amulet nayo ibalulekile kule meko.
Isipho esifanelekileyo nesilungileyo siya kuthenga umfanekiso. Umfanekiso kufuneka ube kunye nomhlaba kwaye kufuneka uxhonywe kwigumbi. Umzobo awufanele ube neentaba, ingaba iindwendwe okanye iindlambo ezikhukhula ngelanga. Ukuba ngaba abazali bafuna umntwana ukuba afundiswe kwaye abe yingqiqo kwixesha elizayo, kufuneka uvelise umfanekiso kunye nomfanekiso wesibhokhwe, uba ngumqondiso wobulumko. Uhlobo olunjalo lwemidwebo luya kutsala amandla abantwana abancinci.
Isiqhelo seFeng Shui sihlonela yonke into enxulumene nentsapho kwaye icebisa ukunika izipho eziselula kubantu abancinci, kungakhathaliseki ukuba ziimifanekiso eziqinileyo okanye imifanekiso eqingqiweyo. Ukuba uthe okratinah, kuya kubakho imifanekiso enemifanekiso ebomvu okanye i-mandarin amadada. Isipho esinjalo siya kuba ngumqondiso wothando olungunaphakade nolonwabo. Ungagqiba umfanekiso ngokudibanisa iifestile ze-steam, eziya kufuneka zifakwe kwigumbi lokulala. Iimvayi zilungele ukuthenga i-porcelain, iglasi, isinyithi okanye umthi.
Unokukhetha kunye nemigangatho yefransi okanye iidada-tangerines, eya kuba ngumqondiso wokungafani kunye nokunyaniseka. Kufanelekile ukuthenga ezo zikhumbuzo, eziza kwenziwa ngeekeramics okanye ngamatye embala elula.
Isimboli sothando kunye nenhlalakahle yentsapho - inyanga yenyanga, ukuxhaswa kweentliziyo zothando, ubanika uxolo kunye novuyo, kwaye uyabakhusela kwiinkathazo.
Ngokugqithiseleyo kwiimeko ezahlukileyo, siyavuyisana nabo osebenza nabo, kubaluleke kakhulu ukuqonda ukuba ufuna ukuthini umntu ukuba afake njengesipho isithomo se-feng shui.
Abo babambisene nabo bazama ukuqhubela phambili kwinqanaba lomsebenzi, bakhombisa umfanekiso wesithenkethe, kodwa elwandle eluthulile okanye indawo yeentaba. Unako ukunika i-talisman ngendlela ye-tortle, ephawulekayo yenkxaso ye-non-decease ye-fishfish, eya kunceda ekuphumeleleni impumelelo.
Ukuba unqwenela umntu ubutyebi bezinto eziphathekayo, menzele isipho ngendlela yomthi wemali okanye i-toad toad. Isipho esinjalo singanikwa umntu othabatha umvuzo, ukuze angashiyi umntu owaneleyo nangona ephelile umsebenzi wakhe.
Isipho esihle kakhulu - izindlovu, luphawu lokungabikho nokuzinza. Kule sipho, into ephambili kukuba i-proboscis ifanele ikhangele.
Igobolondo ephothiweyo isipho esona sihle kunazo zonke umntu ohamba rhoqo.
Isipho kwimpilo okanye kubantu abadala
Imifanekiso enomfanekiso wokwanda kwe-bamboo kunye neengca ziyisipho esihle, njengoko ibonisa ukuhlala ixesha elide kunye nempilo enamandla. Iimpawu ze-peaches okanye i-pumpkin hula ziza kunceda ukuletha amandla kwimpilo nakwimpilo. Izindlovu ziza kunceda ukulungelelanisa amandla asekhaya asebekhulile ngendlela efanelekileyo, njengoko zifanekisela nokuphila ixesha elide.
I-crystal ibhola iya kunceda ukuvelisana ngokomoya kunye nempilo.
IYunivesithi yeengxaki zeFeng Shui
Ngokuqinisekileyo nayiphi na iholide kunye nesiganeko kunokwenzeka ukuba uthenge umculi onjalo njengomculo omoya, ngaba izithintelo. Yona yinkqantosi kakhulu, kuba inceda ukusasaza amandla amandla e-Qi.
I-talisman ngendlela yoBuddha ohlekayo, okanye njengokuba kunjalo, i-Hottay evuyayo, iya kuba yinto efanelekileyo nakweyiphi na imeko. I-Buddha ehlekayo yenziwa ngamaqela ahlukeneyo, nangona kunjalo, inamandla kunazo zonke i-Hottee, ephethe intombazana ehlombe lakhe. Uya kuncedisa ukuvelisa kunye nenjabulo kwi-monasteri.
Ukongeza kwisipho ngokwayo, akungabazeki ukuba kubalulekile ukuba bayinike ngeentliziyo zabo zonke. Ngeenjongo ezingalunganga kwaye kwimeko apho ungenalo ubungane kumntu, awukwazi ukujonga izinto ezinjalo ezinamandla! Emva koko, isipho siza kusindisa amandla omntu owanikezile, oko kuthetha ukuba kuya kuzisa amandla angasebenzi.
Kubaluleke nakakhulu ukuxelela zonke iingeniso kunye nenjongo yesipho, ukuze umntu owamkela isipho awazi kwaye aqonde injongo yongumntu omhle, kwaye ukuba uyakunyamekela ngononophelo lwakho kunye nokunyamekela.
Kuhlala kulufanelekile ukukhumbula inyaniso yokuba isipho sichaza ngokubhetele kunokuba singenanto! Kwiivenkile ezizodwa ungahlala ucela uncedo kumcebisi we-Feng Shui oza kukunceda wenze ukhetho olufanelekileyo kwaye uchaze zonke iinkalo ezilungileyo zaloo nto okanye loo mascot.
Khumbula ukuba i-feng shui talismans isipho esona sihle kakhulu, njengoko siya kunceda ukukhusela indlu yakho kwimiphumo emibi, ukutsala imali, unike uxolo! Isipho esinjalo siya kuba ngumcebisi omkhulu ekwakheni ikusasa elingcono.
Izipho zomtshato zeendwendwe kunye nabazali: iingcinga kunye neengcebiso
Indlela yomntu ngayo ubudlelwane
Iipropati eziwusizo zelisi yamagilebhisi
Amaphetheni kwizinto zangaphakathi zanamhlanje: imifashini yefashoni ngo-2017
Iidloke ze-ushokoleta, iresiphi elula kakhulu kwaye ilungileyo
Ungadla njani ukuba ulahlekelwe isisindo kwaye ukhangele umncinci?
Abantu abamnyama: umthamo omnyama wembombo ekwindla-ebusika 2015-2016
I-pizza ne-squash kunye neeklabishi
Masks zomzimba, izilwanyana zamalungu